ဘ၀နဲ့ ပညာပေး – Thutastar
ငယ်​ရွယ်​တဲ့သူ​တွေဆိုတာ မိုက်​ရူးရဲ့အသက်​အရွယ်​​လေး​တွေပါ အားလုံးရဲ့အုပ်​ထိန်းမူ ညံ့ဖျင်း​နေတဲ့အချိန်​မှာ မန့်​​တွေကလည်း ဒီက​လေးရဲ့ဇရိုက်​မျိုး​ရှေ့​ဆောင်​လမ်းပြမလုပ်​ကြပါနဲ့ အားလုံးဟာလူသား​တွေကြည့်​တိုင်းပါ မ​ကောင်းတာမြင်​ရင်​​ကောင်း​အောင်​သင်​ ​ဖေမကာအမှန်​လမ်းကိုပြင်​​ပေးနိုင်​ကြပါ​စေ ။ အိုရွဲ့ကိုအင်​ရွဲ့နဲ့လိုက်​အုပ်​​နေသ၍​တော့ နိုင်​ငံလည်​ဖြုးဖြိုး တိုးတက်​မှာမဟုတ်​သလို့ လူမျိုး​တွေလည်​တ​နေ့တခြား ပျက်​စွးမူ​တွေများလာ​တော့မှာပါ အကိုတို့အမတို့ ဦးတို့အ​ဒေါ်တို့​မောင်​​လေးတို့ညီမ​လေးတို​ရေ မူတင်​မပြင်​နဲ့ လူပါပြင်​ လူတင်​မပြင်​နဲ့ အယူပါပြင်​ အယူတင်​မပြင်​နဲ့ မတူတာ​တွေလည်​ပြင်​စိတ်​နဲ့ဇရိုက်​အလိုလိုက်​၍မမိုက်​ကြနှင့်​ သက်​ရှိသက်​တ္တဝါ​တွေအားလုံးကိုယ့်​စိတ်​နှစ်​ဖြာ ကျန်​မ္မာချမ်းသာကြပါ​စေ Credit – Comment – ခါတော် မှီ မသိနားမလည် တဲ့ အရွယ်တွေ သူတို့ ဘာသိမလည်း မလု ပ်ဘူးတါလု ပ် ကြည့် င်္ပြိး သင့်တါမသင့် တါမသိ ပျော်နေကြတါ ပါ လမ်းမှန်ရောက် စေဘို့လူ ကြီးတွေက လမ်း ပြ ပေးကြ
ချစ်သူစုံတွဲ နှင့် Living Together ကိစ္စ
ချစ်သူရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together ) လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြပါ ။ အချိန်တွေ ဘာတွေ ဆွဲပြီး တွဲနေတာ ကောင်လေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် ကောင်မလေး ဘက်က အရမ်း နစ်နာတယ် ။ အချိန်တန်ရင် ခေါ် အိပ်လိုက် ။ ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ မရှိတာ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေနဲ့ တူပြီး Snare သီချင်းထဲ ကလို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ ။ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေကို အားကျပြီး တယောက် အကြောင်း
ဟဲ့ ကလေး ကြက်ဥ ဘယ်လို ရောင်းလဲ ” ” တလုံး 150 ပါ အမ ” ”5လုံး 600 ထားလိုက် ” ” ဟင့် မလုပ်ပါနဲ့ အမ ရယ်.. အဲ့ဒါဆိုရင် ကျနော့် အရင်းနား ရောက်နေပြီ ” ” ဟင့်အင်း 600 ရရင် ယူမယ် မရရင် မယူဘူး.. သွားမယ်အေ ” ” အင်း အင်းပါ အမရယ် … ယူသွားပါဗျာ.. ဈေးဦးပေါက်မို့ ရောင်းပေးလိုက် ပါ့မယ် ” အဲ့မိန်းမဟာ ကလေး ထုပ်ပေးတဲ့ ကြက်ဥ ငါးလုံးကို ယူပီး 500 တန်
ကျွန်မ အခု ဒီ Post လေးကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ရေးပြီး မေမေတို့အတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ရှင်
ကျွန်မ အခု ဒီ Post လေးကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ရေးပြီး မေမေတို့အတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ရှင် မေမေတို့ရေ ကျွန်မတို့ မိခင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ပါရှင် ကျန်းမာတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်မှသာ ကျန်းမာ ထူးချွန်ထက်မြက်သော သားသားမီးမီးတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှာပါ ဒီနေ့မနက် အစောပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ CP & CT Member ဝင် မေမေတစ်ဦးဟာ သူရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှသော သမီး နဲ့ သားလေးကို ထားခဲ့ပြီး လောကကြီးကို အပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ ဆိုင်နဲ့ အရမ်းကို အကျွမ်းတဝင်ရှိလှသော မေမေဖြစ်တာမို့ အရမ်းကို ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် အသက်( ၃၇) နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတာမို့ ဒီမေမေဟာ လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်က ကျန်းမာ ဝဖြိုးသော ခန္ခာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အရပ်မြင့်မြင့်
အသက်​အရွယ်​နှင့်​မမျှ တို့အ​ပေါ်ကို တရားပြခဲ့သူ
အသက်​အရွယ်​နှင့်​မမျှ တို့အ​ပေါ်ကို တရားပြခဲ့သူ ငါ ငယ်​ပါ​သေးတယ်​ မ​သေနိုင်​​သေးပါဘူးလို့ သေခြင်းကိုတရားကို ​မေ့ထားသူ​တွေအတွက်​ သေခြင်းတရားကို နှလုံးသွင်းဆင်​ခြင်​ထားဖို့ရာ ဆရာ​လေး​သေး​သေး​လေးက တရားပြခဲ့ပြီ… အ​သေမဦးခင်​ တရားထူးရ​အောင်​ အားထုတ်​သင့်​​ပေပြီ။ စည်းစိမ်​ ရာထူး ဘွဲ့ အာဏာ အစရှိသည်​တို့သည်​ ရာသက်​ပန်​ စိတ်​​အေးချမ်းမှုကို မဖြစ်​​ပေါ်​စေနိုင်​။ တခဏတာ တစ်​ဘဝတာ မျှသာ ဟန်​ပြ​ကောင်း​စေ၏။ သံသရာ ချမ်းသာကို မ​ပေးစွမ်းနိုင်​။ ကုသိုလ်​တရားများစွာထဲမှာမှ ဝိပဿနာတရားကို အားထုတ်​ပွားများခြင်းသည်​သာ အ​သေကိုလည်းတတ်​​စေ၏။ သံသရာလမ်းကိုလည်း ပြတ်​​စေနိုင်​သဖြင့်​များစွာ အားကိုးထိုက်​​သော ဗုဒ္ဓအလို​တော်​ကျ အချိန်​မှီ လိုက်​နာ​သောက်​သုံးသင့်​​သော အံ့ဘွယ်​ ​ဆေးစွမ်း​ကောင်းကြီး တစ်​ခွက်​ပင်​ဖြစ်​​တော့သည်​။ အ​သေမဦးခင်​ အ​ရေးအကြီးဆုံး ဝိပဿနာအလုပ်​ကို လုပ်​ဖြစ်​​အောင်​လုပ်​ကြ၍ ပေါက်​​မြောက်​​အောင်​လည်း အာတာပ ဝီရိယတို့ဖြင့်​ လုပ်​နိုင်​ကြပါ​စေ။ အရှင်​စ​န္ဒောဘာသ(​အောင်​ပင်​လယ်​) =========================== အသကျ​အရှယျ​နှငျ့​မမြှ တို့အ​ပျေါကို
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဟာ လမ်းဘေးမှာ ခဲတံလေးတွေ ရောင်းပြီး ငွေတောင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခွက်ထဲကို တစ်ဒေါ်လာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ သုတ်သီးသုတ်ပျာနဲ့ ရထားပေါ်ကို ပြေးတက် သွားပါတယ်။ နောက်မှ သတိရပြီး ရထားပေါ်က ပြန်ဆင်းလာကာ စောစောက သူငွေထည့်ပေးခဲ့တဲ့ သူဆီ ပြန်သွားပြီး ခွက်ထဲက ခဲတံ တစ်ချောင်းကို နှိုက်ယူလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက အလောတကြီး ဖြစ်နေလို့ ငွေထည့်ပြီး ခဲတံယူဖို့ မေ့သွားတယ်လို့ ပြုံးပြပြီး ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး သူက ငွေတောင်းနေသူကို ပြောတယ်။ “ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပဲလေ။ ခင်ဗျားမှာ ရောင်းစရာတွေ ရှိနေပြီး ဒါတွေကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား။ ကြိုးစားပါ။”လို့ ပြောပြီး ရထားပေါ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သော ညီမလေး သိပါစေ …။
ချစ်သော ညီမလေး သိပါစေ ” ••••••••••••••••••••••••• ♚ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ စည်းတော့ မကျော်စေနဲ့ ပေါ့♚ ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့် ရှိပါတယ်။ မရိုင်းစေနဲ့ ပေါ့ ♚ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အလှ လူတကာ မြင်အောင် ပြချင်နေရင်တော့ မိန်းကလေး တွေရဲ့ တန်ဖိုး ဘယ်သူတွေကို လက်ညိုးထိုးပြရမလဲ ခုခေတ်ကြီးမှာပေါ့ ကွယ် ♚ သနပ်ခါးကို ဘယ်ညာလိမ်း ထမိန်ကို ထိုင်မသိမ်း ၀တ်စရာ မလိုဘူး ♚ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှ ပေါ်အောင်ပြမှ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ အဆင်ပြေမယ် ထင်တဲ့စိတ် လွှင့်ပစ်နိုင်ပါစေ ♚ စကပ်တို ပေါင်ခွဲ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှောင်လွှဲလို
ညီမလေးရေ ……# ချစ်လို့ ပြောတာပါ #
Comments Off on ညီမလေးရေ ……# ချစ်လို့ ပြောတာပါ #
ညီမ​လေးဖတ်​ဖို့​ရေးတဲ့စာ (၂၁) # ချစ်လို့ ပြောတာပါ # ___________________ ညီမလေးရေ …… ညှို့ ငင်ပုံတွေနဲ့တော့ Post မတင်ပါနဲ့ကွယ် ။ ဘယ်လိုကျော်ကျော် ပြီးတာပဲလို့ စည်းကမ်းမထား နည်းလမ်းအမှားနဲ့ ခေတ်အလန်းဇယား စတား မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ တအား နစ်နာသွားရလိမ့်မယ် ညီမလေး ။ အချစ်မမှန်ဟန်ပြ Like ပေး Ment အဆစ်ပြန်ရ နားထင်သွေးဖြန်းပြီး ဘဝင် အေးချမ်းရတယ် မထင်နဲ့ ရင်လေးရမယ့်အဖြစ် ညစ်ထေးတဲ့ စကား ညီမလေး ကြားရလိမ့်မယ် ။ ကျားတွေရဲ့အမြင်မှာ ညီမလေးက သမင်ပျို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထားအသိုတတ်မှ ဝါးမျိုတတ်တဲ့ ပါးစပ်က လွတ်မှာပေါ့ အဖော်အချွတ်တွေ လျှော့ကွယ် ။ ဘဝအရေး လျှော့မတွေးနဲ့ ပေါ့အတွေးမှားရင် ဘဝကလေး
ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူပါ ရှယ်သွားပါ….။
Comments Off on ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူပါ ရှယ်သွားပါ….။
ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောသူကြောင့် April, 25.2018 ပြင်​ဦးလွင်​မြို့အထွက် မဟာအံထူးကံသာဘုရားကြီး အကျော်​တွင်​ ဧပြီလ (၂၅)ရက်နေ့ မနက် (၁၀:၃၀)နာရီအချိန်က ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောတော့ ကားနှစ်စီးတိုက်မိကြ ရှောင်ရင်းတိမ်းရင်း ကားတစ်စီး မြောင်းထဲကျပြီး တစ်ဦးထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရလို့ သန္တိသုခအသင်းမှ ပြုစုပေးပြီး ပြင်ဦးလွင် ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ။ သတင်း – စိုးအောင် ဓါတ်ပုံ – သန္တိသုခ (ပြင်ဦးလွင်) Kts F.B.News =========================== ကားမောငျးရငျး ဖုနျးပွောသူကွောငျ့ April, 25.2018 ပွငျဦးလှငျမွို့အထှကျ မဟာအံထူးကံသာဘုရားကွီး အကြျောတှငျ ဧပွီလ (၂၅)ရကျနေ့ မနကျ (၁၀:၃၀)နာရီအခြိနျက ကားမောငျးရငျး ဖုနျးပွောတော့ ကားနှဈစီးတိုကျမိကွ ရှောငျရငျးတိမျးရငျး
Comments Off on မြေလေးတစ်ပေလောက်နဲ့ ရွာအပျက်မခံကြနဲ
တစ်ခုကြုံရတိုင်း ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစားအများကြီးရပာတယ်။ရွာတွေ၊ရပ်ကွက်တွေ ခေတ်နဲ့အညီပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ (ရေစကြိုမြို့နယ် သစ်ကြီးတောရွာ မီးဘေးကြုံခဲ့ရပြီးနောက်။) အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့…တဇောက်ကန်းလိုလူမျိုးပါရင်…ရွာနာတယ်…… ဦးဇင်းရာ…တပည့်တော်ရင်နာလွန်းလို့ပါ.. မနက်စောစော.. ..ကြားလိုက်ရတဲ့စကား… ကိုသာသန..ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘုရား… တပည့်တော်တို့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုပြီးလူကြီးတွေက..အရင်နှစ်က ကွင်းဆင်းလာလုပ်ပေးတယ်ဘုရား…. ရွာလမ်းတွေချဲ့ပေးပါ…ချဲ့ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.. . သူ့အိမ်ဘက်ကျ ပါတယ်…ငါ့အိမ်ဘက်ကျ ပါတယ်နဲ့…တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စောင်းမြောင်းပြီး..လမ်းကိုချဲ့မပေးကြဘူးဘုရား.. အမှန်က လမ်းမြေတွေပါ…သူတို့က ဝန်းထရံကာရင်း…လမ်းမြေကို ချဲ့ ချဲ့ပြီး ယူထားတာ သံသရာမကြောက်..ငရဲမကြောက်နဲ့ဘုရား.. တပည့်တော်တို့ ဖြူးမြို့မှာနေတော့ အရှင်ဘုရား လဲ ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား.. ဒကာမကြီးတစ်ယောက်လေ…လမ်းမြေယူထားတယ်…ရုတ်တရက်သူကဆုံးသွားတော့.. ကျ န်တဲ့ရွာသူတစ်ယောက်ကိုမှီပြီး….လမ်းမြေကိုပြန်ပေးကြပါ…ငါ့သားငါ့သမီး တွေရေ..လမ်းမြေကိုပြန်ပေးကြပါနဲ့ အော်ပြီးထွက်သွားတယ်လေ… သူ့သားသမီးတွေက အမှူမဲ့အမှတ်မဲ့ပေါ့..ဆုတ်မပေးဘူး…ဒီအတိုင်းထားကြတယ်.. နောက် ၂ ရက်လောက်ရှိတော့ ထပ်ပြီးမှီပါလေရော… မင်းတို့ငါ့စကားနားမထောင်ဘူး…ငါ့စကားနားမထောင်ဘူးပေါ့… သူ့သားသမီးတွေက. ဘာဖြစ်စေချ